Sooyaalkii Axmad Xaayoow 1958-2016 | Laashin iyo Hal-abuur
Sooyaalkii Axmad Xaayoow 1958-2016
Axmad Mocoow Xaayoow “Dulmidiid” (AUN) wuxuu ku dhashay degmada Waaberi, ee magaalada Muqdisho, gobolka Banaadir, bishii March 12/1958. Dugsiga hoose wuxuu uga soo baxay Xamar Jajab, Dugsiga dhexana Raage Ugaas, sanad dugsiyeedki 1979/80 ayuu dugsiga uga baxay Macallin Jaamac. Wuxuu March 15. 1986 ka qalinjebiyay kulliyadda waxbarashada “Lafoole”, kuna takhasusay XISAABAAD/FISIKIS.
Axmed wuxuu kale oo ahaa suugaanyahan ku xeeldheer hal abuurka maansada oo dhan sida curinta; gabayga, guurowga, shiribka, masafada, geeraarka, saarka, jiiftada iyo heesta.Axmad wuxuu ka qaybgalay silsiladdo suugaaneed badan sida:
Silsiladda “Diiwaanka nabadda iyo Deeleyda Qarniga” (Silsilad Maanseed)
Silsiladdii Sallaamaley (Silsilad Gabayeed)
Silsiladii Ismaandhaaf (Silsilad Gabayeed)
Silsiladdii Tirriig (Silsilad Saareed)
Silsiladdi Dhallinyariyo waayeel (Silsilad Maanseed)
Silsiladdii Dhalanrog ( Silsilad Geeraareed)
Silsiladdii Beled iyo Baaddiye (Silsilad Gabayeed)
Silsiladdii Dabargoynta Qabyaaladda(Silsilad Gabayeed)
Silsiladdii Midnimo ( Silsilad Maanseed)
Hadday qaafiyad dhinneyn, Qodob dhigaalkeeda.
Deel qaafna aan laga dhex helin, Dha’ iyo Qaafkeeda.
Qa’da xarafka laba dhacaya uun, Dheeri lagu qaatay.
Dhadhankana macaan qiima badan, Dhug iyo maan qaada.
Dhegtii maqasha ay quud ka dhigan, Dhuuxa qabarkiisa.
Qasdiga loo dhigaayana tahay, Dhaxalka qiimeeya.
Dhib qofkaan u soo marin murtida, Dhuuni qabateysan.
Quruumihi na dhaafiyo raggii, Dhihidda qaabeeyay.
Dhallinyaro qurqurisaa jirtoo, Qaladka dhaafeyne.
Qaylada inaan dhegensannaa, Qaayo dhiciddeeda .
Iyo inaan qaddarinnaa dhismaha, Dhiisha qaradeeda.
Dhankaan qaadaneynaan rabaa, Qalin dhigaal keena.
Gabaygan ayaa ku dhisan, sida ka muuqata xaraf raaca (DH iyo Q) oo si is ku dheellitiran isugu jaangooyey. Alle ha naxariistee, abwaanka ayaa ahaa nin goor walba uu kansho leeyahay iyo fakaag is ku taxallujiya tayeynta iyo kor u qaadidda afka; qoraal iyo dhigaal, dhihid iyo dhadhanba.Tixdan kale, waxay ka mid tahay hannaankaa cusub, ee laba higgaadley ku dhisan waxayna leedahay:
Tii aan calmado tira haween, Tobanka caynoodba.
Cishadaan tallaameen darteed, Taaha celin waayo.
Ee uu tawaawaca cishqigu, Cirib ku sii tiixo.
Cilmi iyo tabtiisi markaan, Tamarta caal waayo.
Caguhuna tallaabada gabaan, Celinin toosnaanta.
Ayay iga tagtaa Caashadaan, Caysh u tebi waayo.
Nasiibka Nolosha 1975(Buug la daabacay)
Yaa Khaldan yaa dulman?
Nimaan dhulmarin dhaayo ma leh (xusuusqor olalaha Reer Miyiga)
Sooyaalkii Mingolka iyo Jinkis Khaan (Tujumaad)